खिच्न नचाहेका तस्बिर - Krishna Mani Baral
Posted on २३ असार २०७८, बुधबार July 8, 2021
यति मात्र भन्छु, यस्ता दृश्य मेरालागि मन पाेल्ने दृश्य हुन्। यस्ता दृश्य क्यामरामा, माेबाइलमा कैद गर्न नपराेस भन्ने लाग्छ । आखिर हामी पाेखरेलीले नै यस्ता दृश्य देख्नपर्ने गरी ब्यवहार गरिरहेका छाै । ताल, खाेला, नहर, नदी फाेहाेर बिसजन गर्ने स्थलकाे रुपमा विकास गरिरहेका छाै । बनाइरहेका छाै ।
तालकाे मुहानमा जथाभावी डाेजर नचाएर माटाे, गेगर तालमा पु¥याउन मद्यत गरी रहेका छौं । तालका मृगौला सिमसार पुरेर घडेरी बनाइरहेका छौं ।
हामीले कस्तो विकास ल्यायौ ? हाम्रो प्राण जोगाउने पानी संरक्षण गर्न नसक्ने । कृषि, पर्यटन, उर्जा जस्ता धेरै क्षेत्रबाट हाम्रो जीवनलाई उज्यालो ल्याइदिने पानी जोगाउनुकाे साटाे विनाश वरिरहेका छाै । पानी जीवनका आधार हुन्। यिनै जीवनका आधार हामीले मास्दै छाै । हामी हाम्रा भावी पुस्तामाथी निर्दयी बनेका छौं । काकाकुल हुने गरी पानीको स्रोत समाप्त गरिरहेका छौं ।
हामीले कस्तो विकास ल्यायौ ? ? ?
आज खिचिएको यो तस्बिर कहाँकाे हाे तपाईले पक्कै चिन्नु भो । प्रकृति संरक्षणमा सबै बेलौमा जुटौं ।
जय प्रकृति ।